नेकपाका नेता भट्टराईलाई जापान सरकारले जापान छिर्नै दिएन ! विमानस्थलबाटै फिर्ता !
साउन २४, २०७५ बिगुल
काठमाडौं, नेपाल कमयुनिस्ट पार्टी (नेकपा)का युवा नेता खिमलाल भट्टराईलाई जापान सरकारले विमानस्थलबाटै फर्काइदिएको समाचार प्राप्त भएको छ। राष्ट्रिय सभाका सांसद समेत रहेका भट्टराईलाई विमानस्थलबाटै फर्काइनुको कारण भने खुल्न सकेको छैन।
भट्टराई नेपाल कमयुनिस्ट पार्टी (नेकपा)का मुख्य सचेतक समेत रहेका छन्। जापानको हिरोसिमामा भैरहेको निशस्त्रीकरणसम्बन्धी कार्यक्रममा भाग लिन पुगेको भएता पनि विमानस्थलबाटै फर्काइएको हो। हिरोसिमामा निशस्त्रीकरण सम्बन्धी कार्यक्रम आयोजना भएको हुँदा नेपाल सरकारले भट्टराई सहित केहि युवा नेताहरूको टोली पठाएको थियो।
भट्टराईको साथमा अनेरास्ववियूका पूर्वअध्यक्ष किशोर मल्ल, दुर्गा शर्मा लगायत अन्य पनि जापान पुगेक थिए। नेपालबाट जापानमा रहेको विभिन्न कार्यक्रममा गएको समयमा मान्छे छोडेर आउने आरोप नेपाली नेताहरु माथि लाग्दै आएको छ। पछिल्लो समय जापानमा नेपाली माथि निगरानी पनि बढेको बुझिएको छ।
प्रकाशित : बिहिबार, साउन २४, २०७५१४:११
रवीन्द्र मिश्रका पिता मनुजबाबु मिश्रको असामयिक निधन प्रति शोक प्रकट !
काँग्रेस संसादले लिपुलेकबारे सोधेको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीको यस्तो जवाफ…
एमाले माअाेवादी पार्टी एकता समायाेजन समितिकाे बैठक बालकाेटमा शुरू
नेपाली कांग्रेसबाट कसकसकाे समानुपातिक सांसद पद ‘खोसियो’ काे काे परे नयाँ ? हेर्नुस् बिस्तृतमा